DABAGAL KOOBAN: Si xilka looga qaado Jawaari Codad intee le’eg u baahan yahay Mooshinkan, RW Kheyre iyo Jawaarise yaa fududaan doona? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL DABAGAL KOOBAN: Si xilka looga qaado Jawaari Codad intee le’eg u baahan yahay Mooshinkan, RW Kheyre iyo Jawaarise yaa fududaan doona? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha DABAGAL KOOBAN: Si xilka looga qaado Jawaari Codad intee le’eg u baahan yahay Mooshinkan, RW Kheyre iyo Jawaarise yaa fududaan doona?
DABAGAL KOOBAN: Si xilka looga qaado Jawaari Codad intee le’eg u baahan yahay Mooshinkan, RW Kheyre iyo Jawaarise yaa fududaan doona?
MUQDISHO(P-TIMES) – Shaki ma saarna in mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya ay mooshin ka gudbiyeen gudoomiyahooda 6-dii sano ee lasoo dhaafay shir gudoominayey, waxaana hadda uu wajahayaa cadaadis iyo culeyskii ugu weynaa oo waligiis ka soo gaara Mudanayaasha golaha Wakiilada.
Jawaari waxaa hadda ka saxiixay mooshinkaas ilaa hadda 120 Xildhibaan, waxaana la rumeysan yahay in ay wali socdaan cod raadinta mooshinkan, iyadoo ay adag tahay in la helo kalsoonida baarlamaanka Faderaalka.
Sharciyad ahaan gudoomiyaha baarlamaanka Faderaalka waxaa xilka ka qaadi kara xildhibaano tiro ahaan gaaraya 184 Xildhibaan, halka Raysalwasaarahana u baahan yahay 134 Xildhibaan oo kaliya, taas oo muujinaysa farqiga u dhaxeeya labada masuul.
Xildhibaanada hadda mooshinka ka soo gudbiyey gudoomiyaha baarlamaanka Faderaalka ayaa laga doonayaa in ay helaan 184 Xildhibaan oo si rasmi codka kalsoonida uga qaada Jawaari, haddii kale wuxuu noqonayaa mid bura oo aan sharciyad ku fadhiyin.
Falanqeeyaasha Siyaasadeed ee kusugan Muqdisho ayaa rumeysan in dabeylaha siyaasadeed ee hadda curtay ay sababi karaan xaalado halis galinaya daganaanshaha dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Xog soo gaartay Puntlandtimes.com waxay cadeynaysaa in Raysalwasaaraha iyo Madaxweynaha Soomaaliya ay gadaal ka riixayaan mooshinkan oo ay ahdda bilaabeen bixinta lacago fara badan oo ku aadan sidii codka kalsoonida looga qaadi lahaa Gudoomiyaha baarlamaanka.